Fumax dia manana programa Vendor Management Inventory (VMI) izay anolorana ny mpanjifa fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny Supply Chain. Ny programa VMI dia tompon'andraikitra amin'ny fitehirizana ny lisitra ho azy ireo araky ny efa voafaritra mialoha.
Ny ekipa dia manara-maso ny fahafahan'ny vokatra misy mandreraka mifototra amin'ny tatitra momba ny varotra ary koa mitantana tahiry famenoana.
Ny VMI Program dia mahasoa raha toa ny mpanjifa na lany ny tahiry na mila tahiry backup, satria mamonjy ny vidin'ny fitahirizana sy ny olana amin'ny fitazonana ny haavon'ny lisitra.
Mbola tsara kokoa aza, ny VMI Program dia mifamatotra amin'ny programa MTO (Made to Order) sy ny programa JIT (Ara-potoana).
Ity programa ity dia mahasoa amin'ny tombana 3-6 volana ny vokatra vita mba tsy hananan'ny mpanjifa mihoatra na latsaka ny vokatra tadiavina. Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fitazonana ny fisian'ny tahiry arak'ireo vokatra nasain'ny mpanjifa izy, izay harahi-maso isan-kerinandro na isam-bolana fa mitazona ny mangarahara amin'ny fampiasana vokatra isam-bolana.
Ho famaranana, Vendor Management Inventory dia mamela ny mpanjifa hifantoka amin'ny fivarotana bebe kokoa ny vokatra vokariny, ary koa mitazona ny takelaka amin'ny lisitra sy ny tahiry misy azy ireo, mitazona ny fahombiazany ary mamaly haingana ny baiko.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny VMI?
2. Saran'ny fandidiana ambany
3. Fifandraisan'ny mpamatsy matanjaka kokoa